Ronald Koeman oo ka hadlay xaaladda Lionel Messi… (Miyuu Kabtanka Barcelona ciyaari doonaa kulanka fiinaalka Spanish Super Cup?) – Gool FM
(Barcelona) 14 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xalay usoo gudubtay kama dambeysta tartanka Super Cup-ka dalka Spain kaddib markii ay rigooreyaal kaga adkaatay dhiggeeda Real Sociedad.
Blaugrana ayaa ciyaartaas 120 daqiiqo ku dhammeysatay la’aanta haldoorkooda Lionel Messi isagoo la tacaalayay dhaawac yar oo aan la shaacin halka uu ka soo gaaray.
Xaaladda Messi ayaanan wali la xaqiijin xilliga ay soo hagaagi doonto iyo goorta uu garoonka ku soo laabanayo, waxaana shakiga laga qabo taam ahaanshahiisa nal ku shiday tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman.
Macallinka reer Netherlands oo saxaafadda la hadlay kaddib guushii dhibka badneyd ee xalay ayaa daaha ka rogay inuusan hubin xaaladda kabtanka kooxdiisa, suuro galna ay tahay inuu qayb ka noqon waayo kulanka fiinaalka tartankan.
Si kastaba ha ahaatee, Barca ayaa kama dambeysta tartanka Spanish Super Cup ku sugeysa midkood Real Madrid iyo Athletic Club kuwaasoo caawa kulankooda la ciyaari doono, waxaana la suureysan karaa in kulanka final-ka uu noqdo El Classico haddii ay Los Blancos soo gudubto.